Paragoay : miresaka ny tantarany ireo mpifindra monina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Febroary 2009 19:06 GMT
Vakio amin'ny teny Español, 繁體中文, 简体中文, Swahili, বাংলা, English
Efa tantara mahazatra izy ity manerana an'i Amerika Latina, izay hikarohan'ny mpifindra monina ny tany tsaratsara kokoa amin'ireo firenena mifanolo-bodirindrina aminy na any amin'ireo firenena lavitra. Tsy hafa fa mitovy amin'izany koa ry zareo Paragoiana izay mandao ny namany sy ny fianakaviany mba hitady ny tsaratsara kokoa, na izany ao Amerika Atsimo na any lavitra hatrany Erôpa. Ny sasantsasany amin'ireny tantara ireny no voambara ao amin'ny seraseran'ny terantany. Ny bilaogy antsoina hoe Somos Paraguayos [es] (paragoiana izahay) no manasa ireo mpifindra monina manerana ny tany mba hitantara ny mikasika ny zavatra niainany voalohany ary hanome valiny ho an'ny Paragoiana ao amin'ny serasera manampy ny valan-dresaka.
Mampihetsi-po ny ankamaroan'ireo tantara mahakasika ny fiezahana miaina any amin'ny tany vaovao, ary ny tantara sasany aza moa dia tena lasa malaza tokoa. Ny zavatra iraisan'ireo tantara rehetra ireo dia ny fikarohana ny tsaratsara kokoa eo amin'ny lafiny ekônômika. Nanoratra ny 30 taona niainany tant Arzantina i Gabriela raha nandao an'i Paragoay izy hitady vola hanampiany ny ray aman-dreniny. Na izay aza dia tsy mora ho azy ny mandao ny tanindrazana :
Ny fangirifiriana vokatry ny fahalavirana sy ny tsy fahafahana mihaino sy manatri-maso ireo olon-tiako, ny tsy fahafahana mijery ny lanitra manga sy ny hazo maitso manim-pofona ary ny lokon'ny tany, ny polka (karazana dihy), ny hamamin'ny fiteny Guarani manainga ny fisainako hahalala bebe kokoa momba ny taniko, ary koa ny mba hahafahako miaro tena amin'ireo fanontaniana apetraka mahakasika ny fomba fiteniko.
Mora kokoa ny miaina lavitry ny tanindrazany noho ny miditra any amin'ny tany hafa noho ny famerana atao amin'ny mpifindra monina. tsy izay rehetra nahavita niditra any amin'ny tany hivahinianany akory dia tafavoaka daholo. Nahita asa tamina mpivady monina any Angletera i Olinda ary nanoratra ny nanaovana tsinontsinona azy nandritra ny fahatongavany teny amin'ny seranam-piaramanidin'i “London's Hearthrow airport” :
Tonga teo amin'ny latabatra fandraisana aho dia olona tsy miteny afa-tsy teny Anglisy no nandray ahy teo, ary tsy nisy azoko izay nolazainy, ny farany dia nitondra mpandika teny ry zareo ary nanontany ahy ny antony hahatongavako any sy zavatra maro hafa koa. Nasainy nankany amin'ny birao indray aho ary nanontaniany zavatra hafa marobe, ary nanjary natahotra aho. Nanontaniany ahy hoe hoatrinonana no naloako tamin'ny saran-dalako, izay zavatra tsy fantatro, ary nanontaniany ahy koa ny hoe terantany inona ilay namako sy ny vadiny (ireo mpivady naka ahy), ka nolazaiko azy ireo fa Paragoiana izy ireo, kanjo tsy marina izany fa Arzantina ilay ramatoa ary Italiana ilay rangahy avy amin'ny rainy, fa nonina tany Paragoay fotsiny ry zareo, ka tsy fantatro ny pitsopitsony rehetra. Nantsoiny ilay ramatoa ary nanontaniany zavatra maro mikasika ahy ka tsy dia nahalala koa izy… teo vao fantatr'izy ireo fa hiasa no nahatongavako any amin'ny taniny.
Nolazain'izy ireo fa ny andro manaraka vao misy fiaramanidina indray, ary tsy maintsy hotazonina ao amin'ny seranana aho mandra-pandehanako miverina ny ampitso maraina. Napetrany tao amin'ny efitrano iray aho, misy fandriana sy efitra fandroana ary fahitalavitra, ary nijanona tao aho mandra-pahatongan'ny andro manaraka. Nokarakarain-dry zareo Anglisy tsara aho ary tsy misy zavatra hitarainako, ny fahatsorako sy ireo niantso ahy no niheveranay fa tsy dia ho sarotra ny hidirana any kanjo tsy izay no zava-nitranga. Nilaza tamiko izy ireo fa raha hiverina any Angletera aho indray andro any dia horaisin-dry zareo tsara satria tsy mba nanana tantara ratsy aho ary tsy nitomany tahaka ny fanaon'ny sasany. Tena tsy azoko hoe maninona ry zareo no niteny izany tamiko, ary raha marina izany, naninona aho no navelany teo ?
Niverina tany Asuncio aho ny andro manaraka ary afaka volana vitsivitsy taty aoriana dia niverina indray aho, tamin'ity indray mandeha ity dia tany Espaina indray. Nentiko ny vola handoavako ny saran-dalako, fa tsy afaka niditra ihany aho… ny fahatelo sady farany, dia nitondra vola bebe mihitsy aho ary nandoa ny saran-dalako mankany Espaina ka izay vao tafiditra aho.
Raha vao tonga any ivelany ianao dia maro amin'ireo mpifindra monina no manomboka fiainana vaovao indray ary mamorona fiaraha-monina miaraka amin'ireo mponina any amin'ny tanondrazana vaovao. Ao amin'ity bilaogy ity, Angel, terantany Espanôla, no nitantara zavatra mampalahelo iray niaraka tamin'ny vadiny Paragoaiana :
Nanambady tovovavy Paragoiana avy any San Lorenzo aho 2 taona sy 3 olana lasa izay (3 taona raha atotaly amin'ny fotoana nahitako azy). Lazaiko hoe nanambady satria ankehitriny dia mananon-tena aho ary manan-janaka mahafatifaty 4 andro monja talohan'ny nahafatesan'ny reniny, ary zazalahy kely 10 taona izay voatery niverina any amin'ny raibeny sy ny renibeny ary tafasaraka tamin'ny anabavikeliny, na dia eo aza ny firaisam-po.
Fahasarotana avy amin'ny fiterahana natao sezarenina no niatombohan'ny herinandro maizina indrindra teo amin'ny fiainako, terak any alatsinainy ny zazakely ary maty zoma ny vadiko. Azoko antoka fa raha tay Paragoay dia efa maty ny alatsinainy ihany izy, saingy tsy misy antony tokony hiresahana izany intsony izao.